Izixhobo ze-Elektroniki -IHardware yasimahla | Izixhobo zasimahla
Ulwazi, inkcazo yokusetyenziswa, iidathasheets, i-pinouts, izixhobo ezikwi-Intanethi, izifundo nayo yonke into oyifunayo ukuze ufunde ukusebenzisa izinto eziphambili ze-elektroniki zeeprojekthi zethu.
Kubaluleke njengokuthenga i-transistor, isithixokazi, i-dimmer okanye isivamvo sobushushu kukwazi ukuyisebenzisa. Iimpawu ekufuneka ziyazi ukuba iyasinceda emsebenzini wethu kwaye singayinyanzela kangakanani.
Ndwendwela iithebhu esizishiya kuwe zakudala phakathi kwezakudala.
I-Ceramic capacitor: yintoni na kunye neenzuzo zayo
Kule bhlog sele sixoxe ngamanye amacandelo e-elektroniki, kuquka i-electrolytic capacitors, kunye nendlela enokuvavanya ngayo. Ngoku...
Iisekethe ezidityanisiweyo: yintoni na, umahluko kunye neziprintiweyo kunye nokunye
por UIsake yenzayo Iiveki ze2 .
Iisekethe ezidibeneyo, iitshiphusi, ii-microchips, i-IC (i-Integrated Circuit) okanye i-CI (i-Integrated Circuit), okanye nantoni na ofuna ukuyibiza ngayo, luhlobo ...
Amasango anengqondo: yonke into oyifunayo ukuyazi
por UIsake yenzayo Iiveki ze4 .
Amasango e-Logic asisiseko se-elektroniki yedijithali. Ngesi sizathu, zibaluleke kakhulu, kwaye ukuba ufuna ukuqala ...
I-Thermal paste yinto esetyenziswa kakhulu kwihlabathi le-elektroniki. Ngokubanzi njengojongano lokuphucula...
por UIsake yenzayo Iinyanga ze3 .
Phakathi kwezinto ze-elektroniki ezihlalutyiweyo yayikwayi-toroidal transformer, ukongeza, siye saphatha olu hlobo lwezinto xa ...
Phakathi kwezinto ze-elektroniki ezihlalutyiweyo kule bhlog sele kukho iintlobo ezininzi ze-transistors, zombini i-bipolar kunye ne ...
por UIsake yenzayo Iinyanga ze4 .
I-photodetector luhlobo lwenzwa enokusetyenziselwa usetyenziso oluninzi kwiiprojekthi zakho ze-DIY. Nokuba u ...
Kwimarike kukho inani elikhulu leebhetri ezinemilinganiselo eyahlukeneyo, amandla, kunye nobuninzi beemilo. Ngamnye…
Umthombo otshintshiweyo sisixhobo se-elektroniki esikwaziyo ukuguqula amandla ombane ngothotho lwezinto zombane, ezinje ...
Ukujonga i-transistor: ichaziwe inyathelo ngenyathelo
Ngexesha elidlulileyo sipapashe isifundo malunga nendlela onokuthi ujonge ngayo ii-capacitors. Ngoku lithuba lelinye icandelo ...
I-Tin desoldering iron: yintoni le nto, ungayisebenzisa njani, kwaye ukhethe eyiphi
I-tin desoldering iron okanye i-tin pump sisixhobo esisetyenziswa ngokubanzi zi-elektroniki, kuba ivumela ukuphelisa ...